Bamboo waa nooc caws adag ah oo ku habboon samaynta teeras aad u adag iyo looxyo lagu sharraxo. Dusha sare ee bamboo ayaa ka dhigaya beertaada muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Bannaanka culus ee bamboogu wuxuu adeegsadaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee bamboo, waxaana lagu sameeyaa farsamada farsamada lagu farsameeyo ...
sida loo rakibo gogosha bamboo
Gogosha bamboo culus ayaa sidoo kale loo yaqaan gogosha xarkaha bamboo. Waxaa laga sameeyaa fiiloyin tayo sare leh oo bamboo ah waxaana lagu cadaadiyaa dhowr kun oo tan oo tiknoolajiyad cadaadis sare leh. Xulashada noocan ah sagxadda bamboo waa ka nadiifsan tahay tan sagxadda bamboo caadiga ah. Waa aniga ...
faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada sagxadda bamboo culus
Horumarka bulshada, dabaqyo aad iyo aad u tiro badan ayaa nolosheena ka muuqda. Marka la barbar dhigo sagxadda dhaqameed ee gogosha, sagxadda bamboo culus waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waa nooc casriyeysan oo gogosha bamboo dhaqameed. Cimri dhererkeeda, xooggeeda iyo adkaanta ayaa si weyn loo hagaajiyay. Sida cagaar cusub ...